Xinhua Myanmar - COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် Lockdown ပြုလုပ်ထားသော ပါကစ္စတန်နိုင်ငံလာဟိုးမြို့မြင်ကွင်းများ
COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေခြင်းကြောင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ လာဟိုးမြို့အား လော့ဒေါင်းပြုလုပ်ထားသည်ကို မေ ၂ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေသော ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ လာဟိုးမြို့တွင် လော့ဒေါင်းပြုလုပ်ထားပြီးနောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကင်းလှည့်နေသည်ကို မေ ၂ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ယခုအခါ COVID-19 ရောဂါ တတိယလှိုင်းအား ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် အပြင်းအထန်ရုန်းကန်နေရသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံ၌ အတည်ပြုလူနာသစ် ၄,၄၁၄ ဦး တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ယခုအခါ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ စုစုပေါင်း ၈၂၉,၉၃၃ ဦးထိရှိလာခဲ့ကြောင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလမ်းညွှန်မှုစင်တာ(NCOC) က မေ ၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
Pakistan's Lahore under lockdown amid COVID-19 pandemic
ISLAMABAD, May3(Xinhua) -- A complete lockdown is imposed in Pakistan's Lahore on Saturdays and Sundays to control the spread of COVID-19 pandemic.
(1)Photo taken on May 2, 2021 showsaclosed market duringalockdown to control the spread of COVID-19 in Lahore, Pakistan. (Photo by Jamil Ahmed/Xinhua)
(2,3,4) Pakistani soldiers patrol onaroad duringalockdown to control the spread of COVID-19 in Lahore, Pakistan, on May 2, 2021. (Photo by Jamil Ahmed/Xinhua)
Previous Article ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ စပိဘုတ်လှေ နှင့် သဲတင်သင်္ဘော တိုက်မိခြင်းကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၂၅ ဦးသေဆုံး
Next Article တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွေ့အကြုံကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက လေ့လာသင်ယူနိုင်ကြောင်း ဖော့စီပြောကြား